10 अफ सीजन यात्रा स्थानहरु विश्वव्यापी | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 अफ सीजन यात्रा स्थानहरु विश्वव्यापी
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा पोर्तुगल, ट्रेन यात्रा स्पेन, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, यात्रा युरोप
पर्यटकहरु को भीड बिना तपाइँको काँध मा हेरेर र प्यारा सानो क्याफे तूफान बिना स्थानीयहरु लाई थाहा पाउनु, यी अफ सीजन यात्रा स्थानहरु विश्वव्यापी एक अविस्मरणीय छुट्टी को लागी सबै भन्दा राम्रो हो.
1. अफ सीजन यात्रा स्थानहरु: आयरल्याण्ड अक्टोबर मा
सुन मा सजिएको, कुरकुरा हावा, विक्लो पर्वत को आयरिश प्राकृतिक सौन्दर्य, डबलिन बाट मात्र एक छोटो ड्राइभ र तपाइँ एक सुन्दर अभयारण्य मा आइपुग्नुहुन्छ. यहाँ, कुनै पनि पैदल यात्रा ट्रेल तपाइँ अद्भुत झरनाहरु लाई नेतृत्व गर्दछ, महाकाव्य दृश्य, र नीलो आकाश वा Glendalough उपत्यका र 6th शताब्दी मध्ययुगीन मठवासी बस्ती.
आयरल्याण्ड अफ सीजन भ्रमण गर्न को लागी एक अतिरिक्त लाभ स्थानीय पब मा गिनीज को एक पिन्ट को आनन्द लिने अवसर हो, दायाँ खुल्ला आगोको अगाडि.
2. इटाली अप्रिल मा
भूमध्यसागरमा डुब्न, ट्रफल उठाउँदै, र भव्य पतन पत्ते, इटाली अप्रिल मा अन्तिम अफ सीजन यात्रा स्थान हो. वसन्त सबैभन्दा राम्रो समय को रूप मा इटाली भ्रमण गर्न को लागी तापमान हो, आर्द्रता, मूल्यहरु, र भीड कम हुन्छ.
सबै को Amalfi तट मा छुट्टी गर्न चाहन्छन्, वा Tuscany मा अंगूर को बोट को बीचमा. तथापि, यो महंगा छ र गर्मी मा भीड, शिखर सिजन. त्यसैले, अप्रिल मा इटाली अफ सीजन को यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो समय हो.
3. अफ सीजन यात्रा स्थानहरु: Loire उपत्यका फ्रान्स मध्य सेप्टेम्बर मा
शरद ahतु डहलिया फूल, ताजा पहाड हावा, शरद पत्ते, र तातो दिनहरुमा हल्का हावा, तपाइँ मौसम को एक निरपेक्ष सपना को Loire घाटी पाउनुहुनेछ. आकर्षक फ्रेन्च ग्रामीण इलाका सेतो मदिरा को लागी परिचित छ, र फसल समय मध्य सेप्टेम्बर मा शुरू हुन्छ.
त्यसैले, Loire को यात्रा गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो समय सेप्टेम्बर मा छ, उच्च मौसम को अन्त्य. तपाइँ यसलाई Chateau de Chaumont गार्डन महोत्सव गर्न सक्नुहुन्छ, Chateau डे ला Bourdaisiere मा टमाटर को त्योहार, र Fontevraud अभय मा यसको भव्य उत्सव संग उत्सव. मशरूम शान्त गुफाहरु मा उठाउँदै, वा हाइकिंग जब तापमान घट्छ, तर दिन अझै उज्यालो को प्रशस्त संग लामो छ – Loire घाटी सेप्टेम्बर मा एक अद्भुत अफ-सीजन गन्तव्य हो.
4. जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ अफ सीजन यात्रा स्थान: म्यूनिख सेप्टेम्बर-अक्टोबर मा
भ्रामक नाम को बावजुद, महान बियर महोत्सव सेप्टेम्बर मा शुरू हुन्छ. Oktoberfest जर्मनी को यात्रा को लागी एक अद्भुत कारण हो, र यसको मूल शहर को लागी, म्यूनिख. यो समयमा, तपाइँ हंगामा मा शहर पाउनुहुनेछ र म्यूनिख महान vibes छ.
जबकि यो मतलब छ कि तपाइँ प्राय: पर्यटकहरु द्वारा घेरिएको हुन सक्छ, यद्यपि यो उच्च मौसम छैन. यो अझै पनी सेप्टेम्बर मा म्यूनिख अफ सीजन को यात्रा को लायक छ, बस Oktoberfest को जादू को अनुभव को लागी.
5. अफ सीजन चीन मा यात्रा स्थान: शंघाई नोभेम्बर मा
को जनसंख्या संग 26 लाख मानिसहरु, तपाइँ सधैं आफैंलाई शंघाई मा एक भीड मा पाउनुहुनेछ. तथापि, शा -्घाईमा अफ सिजन यात्रा गर्नुको मतलब पर्यटकहरु आफ्नो घर बाट घर फर्किएका छन् गर्मी बिदा, त्यसैले तपाइँ स्थानीयहरु संग मिलन हुनेछ.
यसबाहेक, शंघाई मा मौसम तातो र आर्द्रता skyrockets हुन जान्छ, यति धेरै कारण अफ सीजन यात्रा र नोभेम्बर मा शंघाई को skylines प्रशंसा. अक्टोबर-नोभेम्बर शंघाई मा मौसम हो जब आर्द्रता, आवास, र भीड घट्छ. यस तरीकाले तपाइँ रोमाञ्चक र आश्चर्यजनक शहर बाट धेरै धेरै लाभ उठाउनुहुनेछ.
6. अफ सीजन यात्रा स्थानहरु विश्वव्यापी: सेप्टेम्बर मा अन्डालुसिया स्पेन
एक पर्व र चाड लगभग हरेक दिन संग, सुन्दर र मनमोहक Andalusia क्षेत्र सेप्टेम्बर मा एक सपना हो. वाइन फसल महोत्सव बाट समुद्री खाना र समुद्र तट मा कमाना - सेप्टेम्बर को अन्डालुसिया भ्रमण गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो.
जबकि अगस्त को शुरुवात सेप्टेम्बर सम्म अझै पनी धेरै तातो छ, सेप्टेम्बर को अन्त मा तपाइँ वर्षा को एक मौका पाउन सक्नुहुन्छ, वा धूप समुद्र तट-सही दिन, तर हद सम्म तपाइँ सास फेर्न सक्नुहुन्न र सुन्दर अन्डालुसियन शहरहरु वरपर टहल्न सक्नुहुन्न. तातो दिन धूम्रपान. त्यसैले, अन्डालुसिया सेप्टेम्बर को अन्त मा स्पेन मा एकदम सही अफ सीजन गन्तव्य हो.
7. मध्य सेप्टेम्बर मा Algarve पोर्चुगल
Algarve सबै वर्ष राउन्ड आश्चर्यजनक छ, त्यसैले त्यहाँ भ्रमण गर्न को लागी कुनै नराम्रो समय छैन. पोर्चुगल मा भव्य समुद्र तटहरुमा पौडी खेल्न र आराम को लागी, र अटलांटिक किनारा छ र आफैंलाई सबै कोभ्स, मध्य सेप्टेम्बर Algarve भ्रमण गर्न को लागी आदर्श समय हो.
जबकि गर्मी सबैभन्दा तातो छ, यो सबैभन्दा धेरै भीडभाड पनि हो, र जाडो मा, तपाइँ संसार मा सर्फर्स को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु मध्ये एक वरपर surfers को भार पूरा हुनेछ. त्यसैले, Algarve एक आदर्श अफ सीजन मध्य सेप्टेम्बर गन्तव्य हो. तपाइँ शानदार कोभ्स को आनन्द लिने एक दुर्लभ मौका पाउनुहुनेछ, चट्टानहरु, र तट मा माछा मार्ने गाउँहरु.
8. सेप्टेम्बर मा भियना को लागी अफ सीजन यात्रा
सडक भियन्नीज खाना, रक्सी, जिन, वा तपाइँको छनौट को कुनै ककटेल सेप्टेम्बर मा वियना को यात्रा को लागी अद्भुत कारण हो. जबकि गर्मी लगभग बितिसकेको छ, र यो संगै पर्यटकहरुको भीड, तर Viennese शहर मा फिर्ता छन् र त्यस्तै महान चाडहरु छन्.
त्यसैले, भियना शीर्ष मध्ये एक हो 10 यूरोप मा अफ सीजन यात्रा स्थानहरु. तपाइँ धेरै मेलाहरु मध्ये एक मा मनाउन र दाखबारी मा एक पैदल यात्रा लिन को बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भियना मा मात्र सेप्टेम्बर मा उत्सवहरु र केवल स्थानीयहरु को लागी. त्यहाँ अस्ट्रियाई भोजनको आनन्द लिने कुनै राम्रो तरीका छैन, संस्कृति, र भियना को सौन्दर्य स्थानीयहरु संग मिलेर भन्दा.
बस दृश्यहरु पहिले शरद colorsतु रंग र चोटिहरु आफ्नो बर्फीलो सेतो पोशाक मा परिवर्तन परिवर्तन, को स्विस आल्प्स जादुई अफ सीजन हो. धेरैजसो पर्यटकहरु घर फर्किए पछि, स्विस आल्प्स आफ्नो शान्तिपूर्ण जादू पुनर्स्थापित, को लागी कोठा बनाउन बाहिरी गतिविधिहरु र पिकनिक.
त्यसैले, स्विस आल्प्स सेप्टेम्बर मा एक अद्भुत अफ सीजन यात्रा स्थान हो. मौसम तातो छ, सफा नीलो आकाश र तपाइँ पैदल यात्राको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ, साइकलको, आराम र सुन्दर दृश्यहरु को अन्वेषण. त्यसैले, तपाइँ एक मा चढ्न सक्नुहुन्छ युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर पहाडहरु Jungfrau.
10. अफ सीजन यात्रा स्थानहरु विश्वव्यापी: पेरिस डिसेम्बर मा
Champs-Alyeese साथ हिड्दै, वा पर्यटकहरु को भीड बिना Louvre Tuileries गार्डन को माध्यम बाट पेरिस मा एक असाधारण अनुभव हो. पेरिस अफ-सीजन अझ रोमान्टिक छ जब तपाइँ संसारको सबैभन्दा पर्यटक शहर को माध्यम बाट टहल्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुनामा पर्यटकहरु बिना. जबकि गर्मी को सबै भन्दा राम्रो मौसम र धूप दिन प्रदान गर्दछ, डिसेम्बर निश्चित रूप मा पेरिस मा एक छुट्टी को लागी सबै भन्दा राम्रो छ.
डिसेम्बर मा पेरिस अफ सीजन को यात्रा अद्भुत दृश्य को एक प्रतिज्ञा हो. साथै, तपाइँ धेरै मा एक विस्फोट हुन सक्छ क्रिसमस बजार.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई विश्वव्यापी यी काल्पनिक स्थानहरु को लागी तपाइँको अफ-सीजन यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ तपाइँको ब्लग पोस्ट "१० अफ सीजन यात्रा स्थानहरु विश्वव्यापी" तपाइँको साइट मा एम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Foff-season-travel-locations%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)